ary ny kaominina Faux Cap, distrikan'i Tsihombe ny Filoha Andry Rajoelina ny sabotsy 22 febroary 2020. Nitondra fanampiana vonjimaika ho an'ireo mponina izay iharan'ny hain-tany sy tsy fahampian-tsakafo. « Tsy maintsy omena rano fisotro madio ny vahoaka ary tsy maintsy horesena ny tsy fanjarian-tsakafo », hoy izy. Hisy ny famatsian-drano maimaimpoana mandritry ny 4 volana ho an’ireo vahoaka raha toa ka novidiana vola 1500ar hatrany amin’ny 2000 ar ny iray bidon amin’izao vanim-potoana main-tany izao. Efa ho herinandro izao no nisy ny fizarana rano maimaimpoana ao amin'ireo kaominina voakasika ireo. Vahaolana lavitra ezaka hatao kosa ny fitarihan-drano amin’ny alalan’ny “pipeline” mba hahafahana manome rano fisotro madio ny vahoaka, raha ny nambaran’ny filoha. Anisan'ny fiantraikan'ny tsy fisian'ny rano ihany koa ny tsy fanjarian-tsakafo ka nanolotra fanampiana vonjimaika toy ny vary, menaka, siramamy, voamaina ihany koa ny filoham-pirenena. Nomena tohan'aina sy sakafo ara-pahasalamana ihany koa ireo zaza tao an-toerana ary afaka enim-bolana dia hisy indray ny fanaraha-maso ny fitomboan’ireo zaza ireo. Ankoatra izay dia nanome vola 5 tapitrisa dolara ho an’i Madagasikara ny Banky Iraisam-pirenena hanatanterahana ny « vatsin’ankohonana », tohana ara-bola hotantanin’ny FID hatolotra ho an’ireo fianakaviana tena sahirana. Tena ilàna vahaolana maharitra sy mahomby ny zava-misy any Atsimo. Ny tena fahita hatramin’izay, ka hatramin’izao mantsy, dia saika mionona hatrany amin’ny fanampiana sy fizaran-javatra. Toa lasa endrika propagandy ankolaka aza indraindray.